China Eco-enyi na enyi degradable iridescent TPU ịchọ mma akpa factory na suppliers | Changlin
Eco-friendly degradable iridescent TPU ịchọ mma akpa
Holographic TPU ihe bụ abụọ n'èzí n'ígwé nke doro anya TPU ihe onwunwe na otu n'ime oyi akwa nke yi PET nkiri. Na atọ n'ígwé na-arapara ọnụ na-agbanwe na-yi na ọkara transperent holographic TPU ihe.
Ihe onwunwe: Holographic TPU Arọ: 91g
Nha: 18L * 6.5W * 17Hcm Mmechi: Mkpọchi uwe
Ebe Mmalite: Guangdong, CN Port: Shenzhen, HK, Guangzhou
Ngwa: Akpa ịchọ mma, akpa mposi, akpa aka, akpa mkpọ
Advantage: Ihe na-ere ure, mmiri mmiri, mara mma
N'ozuzu, anyị nwere TPU holographic "acha anụnụ anụnụ" na TPU holographic "pink" n'ihi na anyị nwere agba abụọ nke ihe nkiri PET. Ma ọ bụrụ na onye na-abụghị oyi akwa nke doro anya TPU ihe mgbanwe na-tint TPU ihe. Anyị nwere ike ime holographic TPU otu agba dị ka mpụga oyi akwa nke tint TPU. Anyị nwere ike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ holographic TPU, nwa holographic TPU ……
Ihe nkiri TPU anyị na-eji maka akpa bụ ihe 100% TPU na Ọ na-emebi emebi. Olee otú ọ na-egosi? Ihe TPU ga-abụ foogu ma ọ bụ gbanwee ka ọ bụrụ agba aja aja banyere ọnwa isii mgbe emechara. Ihe ngosi ndị a na-egosi na ọ na-eme ka ahụ gbarụọ ma gbarụọ. Na TPU ga-ebibi n'ụzọ nkịtị n'otu afọ ma ọ bụ abụọ mgbe e lisịrị ya n'ime ụwa.
Agba na-adọrọ adọrọ, ọdịdị mara mma
Ezi nkọwa imecha
Nke gara aga: Holographic TPU Handbags Eco-enyi na enyi biodegradable
Osote: TPU ịchọ mma akpa Eco-enyi na enyi Degradable Iridescent
Holographic TPU Handbags Eco-enyi na enyi biodegrad ...
Holographic Kanvas akpa Mara mma ịchọ mma etemeete ...